चिन्तन चौतारी: अल द बेस्ट साउथ अफ्रिका
आज रातिबाट विश्वकप फुटबलको १९ औ संस्करण सुरु हुँदैछ । सम्पूर्ण खेलहरुको राजा समेट फुटबललाई नै मानिने गरिन्छ कारण, तथ्यांक अनुसार संसारमै सबैभन्दा धेरैले हेर्न र खेल्न मन पराएको प्रिय खेल फुटबल नै हो । म पनि मौका मिले जती खेल्छु र हेर्ने गर्छु । मैले विश्वकप फुटबलको बारे सुन्नु अगाडि साफ खेल बारे सुनेको थिएँ । गाउँमा टि.भी. हुने कुरै थिएन तै पनि रेडियोमा प्रत्यक्ष प्रसारण भने खुब सुन्ने गर्दथें । चर्चित खेलाडीहरुको फोटोहरु पत्रीकामा देखे पनि चिन्न सक्दैनथें । मैले विश्वकप हेर्न थालेको चाँही पछी दाङमा पढ्न थाले देखी नै हो । दाङमा आइसके पछी भने 'स्टार स्पोर्टस' पत्रीकाको रेगुलर ग्राहक नै भएको थिएँ । त्यसपछी भने राम्रा खेलाडीहरुलाई चिन्न र उनीहरुको जीवन नजिकबाट नियाल्न त्यती गाह्रो भएन । बिभिन्न देश र क्लबको खेल रणनिती र खेलाडीहरुको भिन्ना भिन्नै खेल्ने शैलीमा मेरो बदी चासो हुन्थ्यो । टि.भी. मा हेर्दा हेर्दै मन निकै तरङित भएर आउथ्यो ।
मैले हेरेको पहिलो विश्वकप सन् १९९८ को हो, जुनबेला म स्कुलको होस्टेलमै थिएँ । त्यतिबेला सरहरुले राती विश्वकप कुरेर बस्नुहुन्थ्यो, हामीहरु निन्द्रामै बिउझेर हेर्न जान्थ्यौ । त्यतिबेला ब्राजिलका रोनाल्डो खुब चलेका थिएँ । मलाई ब्राजिलकै रिभाल्डोको प्रहार पनि साह्रै मन पर्थ्यो । फाईनलमा फ्रान्सले गरेको तीन गोलमा दुई गोल हान्न सफल जिदानको खेलले सधैं लोभाइरह्यो । सन् २००२ को विश्वकपको बेला पनि स्कुलको होस्टेलमा नै थिएँ । होस्टेलमा टि.भी. लाइन ल्याउन नमिलेकाले कुनै खेल आदरणीय धामी सरको घरमा, कुनै प्रदिप सर र रमन सरको कोठामा, कुनै खेल क्लासका साथीहरु सनम र शेखरको घरमा गएर हेर्यौ । सर र साथीहरुसँग बाजी मार्दाको क्षण सम्झिदा अहिले पनि रोमान्चित भैरहेकोछु । सन् २००६ को विश्वकपमा काठमाडौंमा थिएँ । साथीहरुसँग मिलेर टि.भी. किनेर सबै खेल कोठामै हेरेका थियौं । अहिले साथीहरुसँग सँगै बसेर हेर्ने योजना बनाएका छौ । मेरो मन पर्ने खेलाडीहरु अर्जेन्टिनाका मेस्सी, इङ्ल्यान्डका रोनी, ब्राजिलका काका, पोर्चुगलका रोनाल्डो, फ्रान्सका रिबेरी, स्पेनका जावी, जर्मनीका पोडुल्स्की, कोरियाका पार्क, जापानका होन्डा, इटलीका कानाभारो, नेडर्ल्यान्डका रोबेन, उरुग्वेका फोर्लान, क्यामरुनका इटो तथा अन्य उत्कृष्ट खेलाडीहरुको सर्वोउत्कृष्ट प्रदर्शन र कला हेर्न लालायित छु ।
फुटबल खेल एकल प्रदर्शनले जित्न त सकिदैन तर पनि प्रतिभाशाली खेलाडीको प्रयासले भने धेरै नै फरक पार्ने गर्दछ । विश्वकपमा सहभागि ३२ टिम नै छनौट भएर आएकाले कप कस्ले जित्नेछ भन्ने अहिले नै यकिन गर्न निकै गाह्रो छ । प्राय देश र खेलाडी एउटै स्तरका हुने हुँदा कमजोर भनिएका टिमले बलियो टिमलाई पछार्न पनि सक्छन् । बिगतका विश्वकपमा पनि नयाँ देश र नयाँ खेलाडी नचम्केका होइनन् । यसपाली पनि त्यस प्रकारको चमत्कार र नतिजाले निरन्तरता नपाउला भन्न सकिदैन । अहिले कमजोर आँकिएका देशहरुले बलिया भनिने देशसङको खेल नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन् । विश्वकप अगाडि नाम चलेका र राम्रा खेलाडीहरुले अपेक्षित प्रदर्शन गर्न चुक्न सक्छन् र नाम नै नसुनेका नयाँ खेलाडीहरु उदाउन सक्नेछन् । चार बर्षको प्रतिक्षापछी आएको फुटबल चाडमा एक महिनापछी एउटा देश बिजयी बनेर अन्त्य हुनेछ । यस पटक पनि अहिले नै भन्नु पर्दा जितका दाबेदारहरु सधैं झै पुरानै राष्ट्रहरु देखिन्छन् । बिभिन्न सर्बेक्षण र साथीभाइको बिचमा पनि मुख्यतय ब्राजिल, जर्मनी, इङ्ल्यान्ड, अर्जेन्टिना, स्पेन, इटली, फ्रान्स, नेडर्ल्यान्ड, आदी देशहरु मध्येबाट कुनै एकले नै कप उठाउने अनुमान गरिएको छ । खेलाडी र खेल हेर्दा पनि तिनै देशहरुको पल्लाभारी देखिन्छ । मेरो अड्कल पनि ति देशहरुले नै जित्लान् भन्ने त छ, तर पनि मैले भित्र भित्रै चाँही कुनै अफ्रिकन या एसियन देशले जितोस् भन्ने चाहना राखेको छु । यदी त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा कुनै नयाँ देशले नै उपाधी जितोस् भन्ने चाहेकोछु । यदी त्यसो पनि हुन नसके जसले थोरै पटक उपाधी जितेकोछ त्यसैले नै जितोस् भन्ने मेरो कामना हो । दशकौदेखी विश्वाकपमा एकलौती राज गर्दै आइरहेका देशहरुको आधिपत्य तोडियोस् भन्ने पनि कामना गरेकोछु । अहिले हेर्दा भलै त्यो सम्भावना देखिदैन तै पनि खेलमा असम्भव भन्न चाँही सकिदैन । निर्धारित समयभित्र जसले डटेर खेलसक्छ, त्यहिनिर नौलो जादु हुनेछ । हेरौं, अब के के हुन्छ !
कम अन एसिया.. ! कम अन अफ्रिका.. !!
सफल आयोजनाका लागि अल द बेस्ट साउथ अफ्रिका.. !!!
Posted by Chandra Magar at 12:09:00 PM